EU: Iwu nbata Hong Kong ọhụrụ na -eyi ọkwa mba ya egwu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong » EU: Iwu nbata Hong Kong ọhụrụ na -eyi ọkwa mba ya egwu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọchịchị mgbochi iche ọhụrụ nwere ike ime ka ọtụtụ ndị azụmaahịa mba ụwa jụọ ma ha chọrọ ka akpọchie ha na Hong Kong.
Hong Kong toughens chọrọ maka ndị njem si mba ọzọ.
Enwekwaghị ike iwepụ oge ịpụ iche.
Hong Kong ghọtara ọgwụ mgbochi Sputnik V nke Russia mere.
Frederic Gollob, onye isi oche nke European Chamber of Commerce (ECC), kwuru na iwu ọhụrụ siri ike maka ịbanye na Hong Kong nwere ike imebi ọnọdụ obodo ahụ dị ka azụmahịa mba ụwa na ebe azụmahịa.
"Anyị kwenyere na obodo ahụ kwesịrị imeghe na mbụ, ma ọ bụghị ya, usoro mgbochi iche ọhụrụ a nwere ike ime ka ọtụtụ ndị mba ụwa jụọ ma ha chọrọ ka akpọchie ha na Hong Kong n'oge ụwa ndị ọzọ na -ezu ike," ECC isi kwuru.
Izu a, na Hong Kong ndị ọchịchị siri ike ọzọ iwu maka ịbanye mba ahụ. Karịsịa, a kagbuola ohere ịbelata oge ịpụ iche mgbe ọnụnọ nyocha serological maka ọgwụ mgbochi ọrịa.
Mgbe ị na-abanye ụgbọ elu maka Hong Kong, ndị njem ga-ewetara asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nsonaazụ ule na-adịghị mma maka COVID-19, nke edobere tupu awa 72 tupu ọpụpụ, yana ndoputa n'otu n'ime ụlọ oriri na ọ hotelsụ gọọmentịụ gọọmentị na-atụ aro. na -ekwe.
Gọọmentị Hong Kong etinyela Sputnik V nke Russia mere na ndepụta ọgwụ mgbochi coronavirus amatala na mpaghara nchịkwa nchịkwa nke China.
Ugbu a, ịpụ iche maka ndị bi n'obodo a juputara na ọgwụ mgbochi Russia, ga-ebelata site na ụbọchị 21 ruo ụbọchị 14.